China Power Korea laser ingalo picosecond laser ukususwa umatshini umatshini Ukwenziwa kunye Factory | GGLT
Inamandla Korea laser ingalo picosecond laser umatshini ukususwa umvambo
Inamandla Korea laser ingalo picosecond laser umatshini ukususwa umvambo, ngamandla super eliphezulu ukwenzela ukuba ubunzima sombala ukudumba ngokukhawuleza aqhekeze amaqhekeza amancinci, leyo ke kupheliswa umzimba’Inkqubo ye-metabolic. Kuba ixesha le-laser lifutshane kakhulu, lifutshane njenge-trillionths zomzuzwana, akukho lula ukuvelisa ubushushu ukuze bungonakalisi ezinye iindawo zesikhumba. It’Olona khetho lukhethekileyo kolu hlobo lweengxaki zolusu.
I-Picosecond ububanzi be-pulse bubude obuphindwe kayi-10 kunetekhnoloji ye-Q yokutshintsha i-nanosecond, eyenza ukuba ifoto ye-photomechanical engalinganiyo yolusu icace ngakumbi ngonyango oluncinci, amandla amancinci kwaye ngaphandle kokonzakalisa ulusu olungqongileyo. I-Picosecond inokunyanga ii-tattoos zobungcali, i-amateur, traumatic kunye ne-recalcitrant -ezo tattoos esele ziphathwe kwaye zingqineke zinganyangeki kwi-lasose eqhelekileyo yokususa i-lasers.
Xa kuziwa kunyango lwezilonda zombala kunye nokuvuselelwa kwesikhumba, ii-pulses ze-laser ezimfutshane zijolise kwizilonda ezingafunekiyo. I-pigment ichithwa kwiincinci ezincinci eziza kukhutshwa ngokulula ngeenkqubo zomzimba zendalo.
Umatshini we-laser we-Picosecond unokusetyenziswa kwezinto ezintathu eziphambili:
2. Unyango lwezilonda zombala, kubandakanya ilanga kunye namabala amadala, amabala, i-cafe au lait marks, i-nevus ye-ota kunye ne-beckers nevus.
3. Ukuvuselelwa kolusu kunye nokuqina.
Ukudala ifuthe elinamandla le-thermal kwi-trillionths yomzuzwana, i-Picosecond laser`s teknoloji ehambileyo, iyasindisa ulusu kumonakalo ophezulu we-thermal kwaye ijolise kwi-chromophore yokufumana imvume engcono kunyango oluncinci.
Akukho zimbumbulu zilinganiselweyo, sebenzisa ubomi bonke.
2. Isikrini esikhulu, silula kwaye silula.
3.Imenyu enabantu, kulula ukuyisebenzisa;
4. Amandla amakhulu enza ukuba unyango lwakho lusebenze kwaye lusebenze ngakumbi.
5. Inkqubo yokungenisa umoya elungileyo kakhulu kunye nenkqubo yokupholisa ukuqinisekisa ukusebenza iiyure ezinde.
6. Sinokuqinisekisa ngemveliso eyahlukileyo kuba iqokobhe liveliswa ngokwethu.
Ingalo ye-7 yokucacisa i-laser evela eKorea,
Ukuhambisa amandla, ngaphezulu kwama-95%
I-semiconductor ebomvu ejolise ekukhanyeni
10.4” Umbala wokuchukumisa umbala weLCD
110/220 V ~, 4.5 kVA, 50 / 60Hz。
49 * 97 * 98cm
Q1. Sisiphi isiqinisekiso onaso?
I-A1: Bonke oomatshini bethu banesatifikethi se-CE esiqinisekisa umgangatho kunye nokhuseleko. Oomatshini bethu baphantsi kolawulo lomgangatho olungqongqo ukuqinisekisa umgangatho olungileyo. Kungenxa yokuba siqonda ngokupheleleyo ukuba kuya kuba yingxaki enkulu ukuba umatshini unayo nayiphi na ingxaki ngexesha lokusebenza phesheya.
Umbuzo Kutheni le nto kufuneka usikhethe?
I-A2: Umzi mveliso onamandla, unika amaxabiso okhuphiswano kunye neyona teknoloji ilungileyo inamava okuvelisa umatshini wobuhle, iR & D eyomeleleyo iwaranti yeminyaka eli-1 kunye ne-8/24 kwi-Intanethi yenkonzo yokuthengisa emva kokuthengisa, isitshixo sokuba usebenzise ngokusemthethweni uthengise umatshini Ukwahluka kwenkonzo elungelelanisiweyo, amandla e-OEM kunye ne-ODM ekhoyo.
Egqithileyo Picosecond picosure laser umatshini ukususwa sombala
Okulandelayo: Ukusebenza kwe-picosecond laser tattoo pigment umatshini wokususa amabala
Picosecond laser umatshini ukususwa sombala ...
Picosecond ukuboniswa laser ukususwa sombala ...
Amabala amabala ukususwa zonyango CE imvume picosecon ...
Ubusi picosecond laser ukususwa umvambo machi ...